ရည်းစားကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်စေဖို့ (ယောက်ျားလေးများအတွက်) – Gentleman Magazine
ရည်းစားကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်စေဖို့ (ယောက်ျားလေးများအတွက်)
ရိုမန်တစ်ဆန်စေဖို့ ဖော်မြူလာတွေ ရှိပါတယ်။ Date လုပ်တဲ့နေရာမှာ ယောက်ျားလေးတွေ ဘယ်တော့မှ အမှတ်တမဲ့နဲ့ ကျော်မသွားသင့်တဲ့ အရာတွေ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ကောင်မလေးကို စိတ်ကျေနပ်စေဖို့ ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့် ၁၀ ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. သူမကို လှတယ်ထင်အောင် လုပ်ပါ
သူမလာတာနဲ့ သူမရဲ့အလှကို ဆီးချီးကျုးခြင်းဟာ ရည်းစားကောင်းတွေရဲ့ အလုပ်ပါပဲ။ ရိုးရှင်းပြီး ရိုးသားတာဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ သူမ ရှက်နေတတ်တဲ့ အချိန်တွေမှာ ချီးကျူးပါ။ သင်မြင်ဘူးသမျှ ထဲမှာ အလှဆုံးဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပါ။ မိန်းမတွေဟာ သူတို့ချစ်တဲ့ သူတွေအတွက် လှပေးချင်ကြပါတယ်။
၂. သူမကိုလဲ ပိုကောင်းလာအောင် စိန်ခေါ်ပါ
သင်လဲ သူမကို သင့်လို ပိုကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် အားပေးပါ။ သူမ စိတ်ဓာတ်ကျနေရင် အားပေးပေးပါ။ သူမကောင်းမယ်ထင်တဲ့ သင်တန်းတွေ တက်ခိုင်းပါ။ သင် သူမအပေါ် ဘယ်လောက်ဂရုစိုက်လဲဆိုတာဟာ ဒီချစ်ဇာတ်လမ်းကို သက်တမ်းတိုးသွားစေပါတယ်။
၃. သင့်ကိုယ်သင် ပိုကောင်းလာအောင် ပြုပြင်ပါ
အဲဒါက သင့်အပေါ် သူမက ကောင်းသောလွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့ ဘယ်လောက် လွှမ်းမိုးမှူရှိတယ်ဆိုတာ ပြနေသလိုပါပဲ။ ကိုယ်အလေးချိန် ချတာဖြစ်ဖြစ်၊ စာပို ကြိုးစားတာ၊ အရက် အရမ်းမသောက်တော့တာ၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်တာတွေဟာ သူမအပေါ် သင်က ပိုကောင်းတဲ့ ပါတနာဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားပေးတာပါပဲ။
၄. သူမနဲ့ သူမမိသားစုကို လေးစားပါ
သင်က သူမရှေ့မှာ အရမ်း မာနထောင်လွှားပြမနေပါနဲ့။ သူမရဲ့ မိသားစုကို လေးစားပြပါ။ အမှတ်တွေ ပိုရရုံမက သူမမိဘတွေအပေါ် လေးစားကြင်နာပြတာဟာ သင် သူမကို အတည်ကြံတာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြနေသလိုပါပဲ။ သူမမိဘတွေဆီ လက်ဆောင်လေးတွေ ယူသွားပါ။
၅. သူမကို စိတ်ချပါ
ယုံကြည်မှုဆိုတာ ချစ်ဇာတ်လမ်းကောင်းအားလုံးရဲ့ အခြေခံပါ။ သူမကို မေးခွန်းတွေ စေ့စေ့ပေါက်ပေါက်မမေးပဲ သူမသူငယ်ချင်းနဲ့ အပြင်သွားခိုင်းလိုက်တာဟာ သင် သူမကို ယုံကြည်ကြောင်း ပြလိုက်တာပါပဲ။ သင်ကရော သင်ဘာလုပ်လုပ် သဝန်တိုနေတဲ့ လိုက် Check နေတဲ့ ရည်းစားတစ်ယောက် လိုချင်ပါသလား?? သူမလဲ တူတူပါပဲ။
၆. အသေးစိတ်လေးတွေကို သတိပြုမိပါ
သူမဆံပင်မှာ ဟိုက်လိုက် ဖောက်လာပါသလား?? ကိုယ်အလေးချိန် ကျသွားပါသလား?? ဝတ်စုံအသစ် ဝတ်ထားပါသလား?? သင်ဟာ သူမကို ဂရုစိုက်ပြီး နေတာကို သူမကြိုက်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ သင်က အသေးစိတ် မြင်တတ်တဲ့လူဆိုတာလဲ သူမသိသွားစေပါတယ်။
သူမကိုဦးဆောင်ခိုင်းတာဟာ ပထမမှာတော့ သူမကို ဘုရင်မတစ်ပါးလို ခံစားရစေပေမယ့် ရေရှည်မှာ ဘယ်သူမှ နောက်ကနေတဲ့ ယောက်ျားမျိုးကို မလိုချင်ကြပါဘူး။ သင်ဟာ သင်ပဲဖြစ်နေပါ။ ကိုယ့်အတွေးအမြင်နဲ့ကိုယ် ရပ်တည်ပါ။ သူမကို သင် သန်မာကြောင်း ပြပါ။
၈. အိပ်ရာထဲမှာ ဖြေဖျော်မှုပေးပါ
လိင်ကိစ္စဟာ အရေးကြီးတယ်လို့ ပြောတာဟာ နှိမ့်ချတာပါ။ ရည်းစားကောင်းတစ်ယောက်ဟာ သူ့ကောင်မလေးရဲ့ အချစ်ကိစ္စလိုအပ်ချက်အားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ လိင်ကိစ္စလုပ်ချင်တာနဲ့ သူမကို ပျော်စေချင်တာ ကွာခြားပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ မနှုးမနှပ်ပဲ တန်းမလုပ်ပါနဲ့။ သင်ပြီးသွားတာနဲ့လဲ အိပ်ပျော်မသွားပါနဲ့ဦး။
၉. သူမကို မပျင်းစေပါနဲ့
ချစ်ဇာတ်လမ်းကောင်းဆိုတာ ဘယ်တော့မှ အရှိန်သေမနေပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် သင်တို့ရဲ့ တက်ကြွစိတ်တွေ ပျောက်မသွားအောင် သူမအမြဲတမ်း ခန့်မှန်းနေရအောင် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် ဖြစ်နေရပါမယ်။ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တာဟာ သူမကို ပိုပြီး ပျော်ရွှင်စေပါတယ်။
သူမ စကားပြောလိုက်တာနဲ့ သူမပြောတာကို အာရုံစိုက်ပြီး နားထောင်ပါ။ သူမရင်သားကို ငမ်းနေရလို့ ဘာမှမသိလိုက်တာမျိုး ဖြစ်မသွားပါနဲ့။ ရည်းစားကောင်း တစ်ယောက်ဟာ ပြန်ပြီးစိတ်ပါဝင်စားမှုနဲ့ မေးမြန်းပါတယ်။ သူမပြောတာ စိတ်ဝင်တစားနားထောင်တာဟာ သူမရဲ့ အမြင်တွေကို လေးစားပြီး သူမကို စိတ်ဝင်စားတာပါပဲ။
ရညျးစားကောငျးတဈယောကျ ဖွဈစဖေို့ (ယောကျြားလေးမြားအတှကျ)
ရိုမနျတဈဆနျစဖေို့ ဖျောမွူလာတှေ ရှိပါတယျ။ Date လုပျတဲ့နရောမှာ ယောကျြားလေးတှေ ဘယျတော့မှ အမှတျတမဲ့နဲ့ ကြျောမသှားသငျ့တဲ့ အရာတှေ ရှိပါတယျ။ ကိုယျ့ကောငျမလေးကို စိတျကနြေပျစဖေို့ ယောကျြားကောငျးတဈယောကျရဲ့ အကငျြ့ ၁၀ ခုကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁. သူမကို လှတယျထငျအောငျ လုပျပါ
သူမလာတာနဲ့ သူမရဲ့အလှကို ဆီးခြီးကြုးခွငျးဟာ ရညျးစားကောငျးတှရေဲ့ အလုပျပါပဲ။ ရိုးရှငျးပွီး ရိုးသားတာဟာ အရေးကွီးပါတယျ။ သူမ ရှကျနတေတျတဲ့ အခြိနျတှမှော ခြီးကြူးပါ။ သငျမွငျဘူးသမြှ ထဲမှာ အလှဆုံးဖွဈကွောငျး ပွောပွပါ။ မိနျးမတှဟော သူတို့ခဈြတဲ့ သူတှအေတှကျ လှပေးခငျြကွပါတယျ။
၂. သူမကိုလဲ ပိုကောငျးလာအောငျ စိနျချေါပါ
သငျလဲ သူမကို သငျ့လို ပိုကောငျးတဲ့ လူတဈယောကျဖွဈလာအောငျ အားပေးပါ။ သူမ စိတျဓာတျကနြရေငျ အားပေးပေးပါ။ သူမကောငျးမယျထငျတဲ့ သငျတနျးတှေ တကျခိုငျးပါ။ သငျ သူမအပျေါ ဘယျလောကျဂရုစိုကျလဲဆိုတာဟာ ဒီခဈြဇာတျလမျးကို သကျတမျးတိုးသှားစပေါတယျ။
၃. သငျ့ကိုယျသငျ ပိုကောငျးလာအောငျ ပွုပွငျပါ
အဲဒါက သငျ့အပျေါ သူမက ကောငျးသောလှမျးမိုးခွငျးနဲ့ ဘယျလောကျ လှမျးမိုးမှူရှိတယျဆိုတာ ပွနသေလိုပါပဲ။ ကိုယျအလေးခြိနျ ခတြာဖွဈဖွဈ၊ စာပို ကွိုးစားတာ၊ အရကျ အရမျးမသောကျတော့တာ၊ ဆေးလိပျဖွတျတာတှဟော သူမအပျေါ သငျက ပိုကောငျးတဲ့ ပါတနာဖွဈလာအောငျ ကွိုးစားပေးတာပါပဲ။
၄. သူမနဲ့ သူမမိသားစုကို လေးစားပါ
သငျက သူမရှမှေ့ာ အရမျး မာနထောငျလှားပွမနပေါနဲ့။ သူမရဲ့ မိသားစုကို လေးစားပွပါ။ အမှတျတှေ ပိုရရုံမက သူမမိဘတှအေပျေါ လေးစားကွငျနာပွတာဟာ သငျ သူမကို အတညျကွံတာဖွဈကွောငျး ပွောပွနသေလိုပါပဲ။ သူမမိဘတှဆေီ လကျဆောငျလေးတှေ ယူသှားပါ။
၅. သူမကို စိတျခပြါ
ယုံကွညျမှုဆိုတာ ခဈြဇာတျလမျးကောငျးအားလုံးရဲ့ အခွခေံပါ။ သူမကို မေးခှနျးတှေ စစေ့ပေ့ေါကျပေါကျမမေးပဲ သူမသူငယျခငျြးနဲ့ အပွငျသှားခိုငျးလိုကျတာဟာ သငျ သူမကို ယုံကွညျကွောငျး ပွလိုကျတာပါပဲ။ သငျကရော သငျဘာလုပျလုပျ သဝနျတိုနတေဲ့ လိုကျ Check နတေဲ့ ရညျးစားတဈယောကျ လိုခငျြပါသလား?? သူမလဲ တူတူပါပဲ။
၆. အသေးစိတျလေးတှကေို သတိပွုမိပါ
သူမဆံပငျမှာ ဟိုကျလိုကျ ဖောကျလာပါသလား?? ကိုယျအလေးခြိနျ ကသြှားပါသလား?? ဝတျစုံအသဈ ဝတျထားပါသလား?? သငျဟာ သူမကို ဂရုစိုကျပွီး နတောကို သူမကွိုကျပါတယျ။ အဲဒါဟာ သငျက အသေးစိတျ မွငျတတျတဲ့လူဆိုတာလဲ သူမသိသှားစပေါတယျ။
သူမကိုဦးဆောငျခိုငျးတာဟာ ပထမမှာတော့ သူမကို ဘုရငျမတဈပါးလို ခံစားရစပေမေယျ့ ရရှေညျမှာ ဘယျသူမှ နောကျကနတေဲ့ ယောကျြားမြိုးကို မလိုခငျြကွပါဘူး။ သငျဟာ သငျပဲဖွဈနပေါ။ ကိုယျ့အတှေးအမွငျနဲ့ကိုယျ ရပျတညျပါ။ သူမကို သငျ သနျမာကွောငျး ပွပါ။
၈. အိပျရာထဲမှာ ဖွဖြေျောမှုပေးပါ
လိငျကိစ်စဟာ အရေးကွီးတယျလို့ ပွောတာဟာ နှိမျ့ခတြာပါ။ ရညျးစားကောငျးတဈယောကျဟာ သူ့ကောငျမလေးရဲ့ အခဈြကိစ်စလိုအပျခကျြအားလုံးကို ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျပါတယျ။ လိငျကိစ်စလုပျခငျြတာနဲ့ သူမကို ပြျောစခေငျြတာ ကှာခွားပါတယျ။ ဘယျတော့မှ မနှုးမနှပျပဲ တနျးမလုပျပါနဲ့။ သငျပွီးသှားတာနဲ့လဲ အိပျပြျောမသှားပါနဲ့ဦး။
၉. သူမကို မပငျြးစပေါနဲ့
ခဈြဇာတျလမျးကောငျးဆိုတာ ဘယျတော့မှ အရှိနျသမေနပေါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ သငျတို့ရဲ့ တကျကွှစိတျတှေ ပြောကျမသှားအောငျ သူမအမွဲတမျး ခနျ့မှနျးနရေအောငျ လြှို့ဝှကျဆနျးကွယျ ဖွဈနရေပါမယျ။ စိတျကူးယဉျဆနျတာဟာ သူမကို ပိုပွီး ပြျောရှငျစပေါတယျ။
သူမ စကားပွောလိုကျတာနဲ့ သူမပွောတာကို အာရုံစိုကျပွီး နားထောငျပါ။ သူမရငျသားကို ငမျးနရေလို့ ဘာမှမသိလိုကျတာမြိုး ဖွဈမသှားပါနဲ့။ ရညျးစားကောငျး တဈယောကျဟာ ပွနျပွီးစိတျပါဝငျစားမှုနဲ့ မေးမွနျးပါတယျ။ သူမပွောတာ စိတျဝငျတစားနားထောငျတာဟာ သူမရဲ့ အမွငျတှကေို လေးစားပွီး သူမကို စိတျဝငျစားတာပါပဲ။
Previous: မိန်းမတွေ ဘာလိုချင်သလဲ
Next: လက်မထပ်ခင် ကြိုတင်သိထားသင့်သည့်အချက်များ